Asphalt Xtreme: Rally Racing Android အတွက်ဒေါင်းလုပ်ပြုလုပ်ပါ
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » ကတ္တရာ Xtreme: ပြိုင်ပွဲပြိုင်ပွဲ
ကတ္တရာ Xtreme: ပြိုင်ပွဲပြိုင်ပွဲ APK ကို
NO လမ်း။ NO RULES!
သာမန်ကနေအခမဲ့ချိုးကတ္တရာသုံး Xtreme နှင့်အတူ uncharted ပိုင်နက်ထဲသို့ဝငျ: ပြိုင်ပွဲပြိုင်ပွဲ!
သင်ဒီမှာလိုအပ်သမျှကိုယ့်စိတ်ထဲက, အမှန်တကယ်ကျွမ်းကျင်မှုနဲ့မြန်နှုန်းများအတွက်အကြောက်ကင်းအလိုဆန္ဒကြောင့်ဒါကြောင့်သင်ကပြိုင်ကားနှင့်ပတ်သက်ပြီးသိကျွမ်းအရာအားလုံးကိုမေ့လျော့။ သင်, သဲတောင်ကုန်းတဝိုက် Race ချောက်ကြီးများမှတဆင့်အားသွင်းခြင်း, အမှိုက်ကိုဖြတ်ပြီးလွင့်မျောနေသောနှင့်တစ်ခုလုံးဝအစွန်းရောက်ပြိုင်ကားအတွေ့အကြုံကို၏တစ်စိတ်တစ်ဒေသအဖြစ် finish ကိုလိုင်းရောက်ရှိဖို့ရန်သင့်ပြိုင်ဘက်အတိတ်ကိုတက်မယ်!
• 50 + Monster machine: တစ်4×4Monster Truck ကားများတွင်အခမဲ့သင့်ရဲ့အတွင်းစိတ်သားရဲ၏သတ်မှတ်မည်။ တစ်ကြွက်သား Car ဖြင့်အစာရှောင်ဘီးအဘို့သင့်စိတ်အားထက်သန် Feed ။ သင်တစ်ဦးခေတ်ရဲ့သွက်လက်တဲ့ယုန်ကလေး, တစ်ခက်-နှိပ် Pickup တစ်ဦးဖုန်-မေတ္တာရှင်ပြိုင်ပွဲကား, တစ်ဦးအာဏာထုပ်ပိုး SUV ကားသို့မဟုတ်ကိုလညျးမတားဆီး Truck ကားကိုမောင်းအဖြစ်သို့မဟုတ်ရုံလမ်းကြောင်းအပေါ်ရိုင်းသွားပါ!
•သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဟန်တိုက်ဖျက်မည်: သင်7offroad မော်တော်ယာဉ်အမျိုးအစားများထံမှကောက်ယူအဖြစ်ထုံးစံရွေးချယ်စရာမရှိန့်သတ်ချက်, ဂိမ်း၏တစ်မူထူးခြားသောအရသာနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီရှိပါတယ်။ ဒါဟာသင်အတွေ့အကြုံများအားစိန်ခေါ်အဆက်မပြတ်လတ်ဆတ်ရှာဖွေတွေ့ရှိရန်ခွင့်ပြုပါတယ်။ ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းမှန်မှန် updates များကိုထည့်သွင်းရန်, စမ်းအသစ်တစ်ခုခုကိုအမြဲရှိပါတယ်။
•အကြီးမားဆုံး BRAND: ကျနော်တို့ offroad ပြိုင်ကားရဲ့အကောင်းဆုံးလိုင်စင်ရမော်တာစက်တွေကိုပိုမို Jeep, Ford, Mercedes-Benz, Predator, Dodge, Chevrolet ကားများနှင့်ဝန်လွှတ်ပါတယ်။
• REAL-TIME multiplayer: တစ်ပြိုင်နက်အခမဲ့-for-alls 8-player ကိုတချို့ဦးခေါင်း-to-ခေါင်းကိုအွန်လိုင်းပြိုင်ကားတက် Pick! သငျသညျအခြို့သောတင်းကျပ်စွာယှဉ်ပြိုင်မှုနှင့်ရင်ဆိုင်နေရ, ဒါကြောင့်သင်ဦးဆောင်သူကိုတက်အပေါင်းတို့နှင့်တကွသင်၏မိတ်ဆွေများအထက်မြင့်တက်အဖြစ်သင့်ဂိမ်း၏ထိပ်ပေါ်မှာနေဖို့ပါလိမ့်မယ်!
•လောကသင့်အပွေးပွိုငျလမျး IS: အားလုံးကမ္ဘာလုံးကျော်ထံမှထူးခြားဆန်းပြားနှင့်အစွန်းရောက်တည်နေရာအမျိုးမျိုးအတွက်လူမျိုး။ Svalbard ၏ရေခဲမြစ်ဖျက်စီးဖို့ပြင်ဆင်ပါ, ထိပ်သီးအစည်းအဝေးသည့်အဲလ်ပ်တောင်တန်း, ဖူးခက်၏တောမှတဆင့်ဖြတ် Coachella ချိုင့်ရဲ့တောင်ကုန်းတဆင့်မြန်နှုန်း, ဒက်ထရွိုက်ရဲ့သံမဏိစက်များမှတဆင့်အာဏာကို & အများကြီးပို။ အသစ်အပုဒ်အနာဂတျတှငျထညျ့သှငျးရအဖြစ် Plus အား, အကွေးပတ်လည်လှည့်ကွက်ကအမြဲရှိပါတယ်။
•သင့်စီးနငျးတိုကျခိုကျ customize: သင်၏တပ်အားကစားကားတစ်စီးရဲ့အင်ဂျင်ပါဝါတက်စုပ်ဖို့လိုအပ်နေသောူပည်သူ? စတိုင်၌သင်တို့၏ဆန္ဒပြပွဲပြိုင်ကားသမားထွက် decking တူခံစား? ဘီးအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှအစုံပုဂ္ဂိုလ်ရေးမြန်နှုန်းစက်ဖြစ်စေကြောင်းအားလုံးအတှကျထုံးစံ Setup နှင့်အဆင့်မြှင့်တစ်ဦးအထင်ကြီးစုဆောင်းမှုရှိပါတယ်။
•အပြည့်အဝ OFFROAD အတွေ့အကြုံ GET:5ဂိမ်းသည် Modes နှင့်အတူကြိုးစားရန်အသစ်သောတောင်တက်ရန်အတားအဆီးနှင့်အတှေ့အကွုံမြား 300 Mastery စိန်ခေါ်မှုများ, လီမိတက်အချိန်ပွဲများ, Daily သတင်းစာမစ်ရှင်များ, အထူးစီမံကိန်းများနှင့်ထရပ်ကားတစီးထက်ပိုပြီးပိုပြီးလမ်း, 1,100 အလုပ်ရှာဖွေရေးဖြစ်ရပ်များအပေါ်အမြဲရှိပါတယ် နေ့စဉ် update ကို! တစ်ခုတည်းသောမေးခွန်းတစ်ခုကို, သင်ကအားလုံးကိုကိုင်တွယ်ရန်လုံလောက်သောအစွန်းရောက်တွေဟာသလဲ?
•အလွန်အတွေ့အကြုံ: အဘယ်သူမျှမကအခြားပြိုင်ကားသမားဒီအပြင်းအထန်ဂရပ်ဖစ်၏ကန့်သတ်တွန်း, အစစ်အမှန်ရူပဗေဒဒီလောက်မရှိတဲ့, ဒါမှမဟုတ်မြန်နှုန်းမြင့် nitro လုပ်ဆောင်မှုသည်ဤဝေး! ဒီဂိမ်းကားမောင်းသူရဲ့ထိုင်ခုံ၌သငျရနှငျ့အခြို့အံ့သြဖွယ်မြန်နှုန်းထွက်လက်သည်းဖို့မစောင့်နိုင်သောကြောင့်, ဒါကြောင့်တက်ဓာတ်ငွေ့နှင့်အစာရှောင်ခြင်းချွတ်!
သငျသညျသေးတက် revved ပါသလား? မရလျှင်သင်ရုံကသင်၏အသက်တာ၌ကထုတ်တဲ့တစ်ဦးကိုပစ်ခတ်လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်! ဒါဟာသမားရိုးကျပြိုင်ကားသမားကိုကြိုက်ပါဘူးသူမည်သူမဆိုများအတွက်ပြိုင်ကားသမားဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုခြိုးဖောကျသောသူတို့အဘို့ဂိမ်းရဲ့ box ကိုပြင်ပမှာထင်နှင့်တစ်ဦးအပြေးပြိုင်ပွဲလမ်းကြောင်း၏ကန့်သတ်ခြင်းဖြင့်သတ်လို့မရပါ! ဆန္ဒပြပွဲကားများ, အစစ်အမှန်အစွန်းရောက်အားကစား, ပျံ့ပြိုင်ကား, offroad Adventures ဖုန်ထဲမှာဆင်းရတဲ့နှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည်-ပျံ၏ပရိသတ်များများအတွက်ဂိမ်း! ဤအရာမဆိုသင်ပါသလား? အခမဲ့အခုအချိန်မှာပြိုင်ပွဲပြိုင်ပွဲ: ထိုအခါကတ္တရာသုံး Xtreme ကို download လုပ်ပါ!
http://asphaltxtreme.com/ - တရားဝင် site ပေါ်တွင်ဂိမ်းအကြောင်းပိုမိုထွက်ရှာမည်
Facebook မှာ: http://gmlft.co/AXTR_Facebook
Instagram ကို: http://gmlft.co/AXTR_Instagram
YouTube ကို: http://gmlft.co/AXTR_YouTube
ဒီ app ကိုသင် app ကိုအတွင်းက virtual ပစ္စည်းများဝယ်ယူရန်ခွင့်ပြုကာတတိယပါတီ site ကိုမှသင်က redirect စေခြင်းငှါတတိယပါတီကြော်ငြာများပါဝင်နိုင်သည်။
1.00 GB ကို